Bible Mu Nsɛm Yesu Awo Besi Ne Wu - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Wɔsomaa ɔbɔfo Gabriel kɔɔ ababaa fɛfɛ bi a wɔfrɛ no Maria nkyɛn. Ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔbɛwo ba a obedi hene daa. Wɔwoo abofra yi, a ɔne Yesu, wɔ mmoa adididan mu, faako a nguanhwɛfo kɔsraa no. Akyiri yi nsoromma bi kyerɛɛ mmarima a wofi Apueifam kwan kɔɔ abofra no nkyɛn. Yehu onii a ɔma wohuu saa nsoromma no, ne sɛnea wogyee Yesu fii mmɔden a wɔbɔe sɛ wobekum no no mu.
Afei, yehu Yesu bere a wadi mfe 12 sɛ ɔne akyerɛkyerɛfo rekasa wɔ asɔrefi hɔ. Mfe dunwɔtwe akyi no wɔbɔɔ no asu, na afei ofii Ahenni ho asɛnka ne kyerɛkyerɛ adwuma a Onyankopɔn somaa no baa asase so sɛ ɔmmɛyɛ no ase. Sɛnea ɛbɛyɛ na aboa no wɔ saa adwuma yi mu no, Yesu paw mmarima 12 yɛɛ wɔn n’asomafo.
Yesu yɛɛ anwonwade pii nso. Ɔde mpataa ne abodoo kakraa bi maa nnipa mpempem ma wodi mẽe. Ɔsaa ayarefo yare na onyan awufo mpo. Na afei yɛte nneɛma pii a ɛbaa Yesu so wɔ n’asetra nna a edi akyiri no mu, ne sɛnea wokum no. Yesu kaa asɛm bɛyɛ mfe abiɛsa ne fã, enti ƆFA 6 ka bere tenten a ɛboro bɛyɛ mfe 34 kakra mu nsɛm.
Yesu wui no, ɛdii mfe ahe ansa na wɔrekyerɛw Nsɛmpa no?